Indlu enamakamelo amabili okulala i-Deluxe - Amafulethi Iyaqashisa e-Rimini, Emilia-Romagna, i-Italy
Indlu enamakamelo amabili okulala i-Deluxe
Rimini, Emilia-Romagna, i-Italy
Ifulethi lonke ibungazwe ngu-Nero D'Avorio Aparthotel
Izivakashi ezingu- 4 · amakamelo okulala 2 · imibhede engu-2 · Igumbi lokugezela elilodwa
Lo mbungazi uzibophezele enqubweni yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezingu-5 ye-Airbnb. Funda kabanzi
Faka izinsuku zakho zohambo ukuthola imininingwane yokukhansela kulokhu kuhlala.
Ifulethi elihle kakhulu elinamagumbi amathathu endaweni yokuhlala kanokusho **** s. Kuhlanganiswe negumbi lokuphumula elinosofa, itafula lokudlela, ikhishi elihlome ngokuphelele namakamelo okulala amabili, womabili anekhabethe elifanelekile nendlu yokugezela eneshawa. 10 sqm kuvulandi netafula labantu abangu-4-6 + okungenzeka babe nemibhede emibili yasolwandle. Iphuli yesizini iyatholakala + i-Spa. Indawo ekahle yamaholide okuphumula. Ukupaka kwamahhala.
32 ”satellite TV endaweni yokuhlala
I-32 ”satellite TV egumbini lokulala elikabili
Ukushisa kwasebusika okuzimele
I-Wi-Fi engenamkhawulo futhi yamahhala
Isiqandisisi esinomkhawulo wesithwathwa
Ukupaka kwangasese, kuqinisekisiwe futhi kumahhala egcekeni lethu langaphakathi ngokubhekwa kwevidiyo (1 efulethini ngalinye)
Kuvulandi omkhulu onentambo yezingubo nezindwangu zokugqoka
Ikhishi elinama-burner kagesi
I-ayina ibhodi ngensimbi
Isethi yesipanji sokugeza
Isitoreji semithwalo yamahhala endaweni ephephile
Umbhede wengane ngesicelo (ngemali ethile)
Ikhishi lihambisana nomuthi wokugeza izitsha, isipanji esinendawo yokuhlanza kabili nendwangu yokuphambanisa
Imicrowave (uma iceliwe)
Igumbi lokugezela le-Spa esitezi esiphansi lilungele nabantu abakhubazekile
Ububanzi bomnyango ezindlini ezivumela ukungena noma ngesihlalo esinamasondo
Ukungabikho kwemingcele yokwakha
Izindawo zokupaka ezilula emnyango wesakhiwo
Izivakashi zikwazi ukungena ehholo lendawo yokuhlala, idamu lokubhukuda lonyaka, indawo yokupaka izimoto, indawo yokuhamba izinja, iSpa ngemali ekhokhwayo.
Ifulethi lisendaweni engamamitha angama-50 ukusuka esitobhini sebhasi iRimini - Riccione, amamitha angama-50 ukusuka eMetromare (insizakalo kamasipala endaweni ephakathi kweRimini neRiccione). Amamitha ayi-500 ukusuka eRimini Terme, izinyathelo ezimbalwa ukusuka olwandle. Ukuqashwa kwamabhayisikili kuyatholakala.
Ifulethi elihle kakhulu elinamagumbi amathathu endaweni yokuhlala kanokusho **** s. Kuhlanganiswe negumbi lokuphumula elinosofa, itafula lokudlela, ikhishi elihlome ngokuphelele namakamelo okulala amabili, womabili anekhabethe elifanelekile nendlu yokugezela eneshawa. 10 sqm kuvulandi netafula labantu abangu-4-6 + okungenzeka babe nemibhede emibili yasolwandle. Iphuli yesizini iyatholakala + i-Spa. Indawo ekahle yama… funda kabanzi
Lo mbungazi unokushiwo abanye okungu-9 kwezinye izindawo zokuhlala. Veza okunye okushiwo abanye
Ifulethi lisendaweni ehlelekile, imizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yeRiccione, elula kakhulu ukufinyelela kulo lonke ugu, zombili ngokuthuthwa komphakathi nangemoto. Sinezivumelwano namabhishi ahlukahlukene, noma nje ngamamitha angama-400 kunebhishi elihle lamahhala eduze kweTerme di Rimini.
Ifulethi lisendaweni ehlelekile, imizuzu eyi-10 ukusuka enkabeni yeRiccione, elula kakhulu ukufinyelela kulo lonke ugu, zombili ngokuthuthwa komphakathi nangemoto. Sinezivumelwano namabhishi ahlukahlukene, noma…
Ibungazwe ngu-Nero D'Avorio Aparthotel
Ukwamukelwa Kutholakala amahora angama-24 ngosuku, izinsuku ezingu-7 ngesonto nganoma yiziphi izidingo zakho.
Ukungena: 14:00 - 02:00
Hlola ezinye izinketho ezise- Rimini namaphethelo
Ezinye izindawo zokuhlala e- Rimini:
Izindlu · Ama-Bed and Breakfast · Ama-loft · Ama-Villa · Amafulethi